सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक भएर अघि बढ्नैपर्छ
(नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप–
- सबैभन्दा पहिलो कुरा, सदनमा बारम्बार अवरोधलगायतका समस्या आइरहेका छन् । सरकारलाई काम गर्न यो अवस्थाले पनि केही अप्ठेरो उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर जनताको जनादेश प्राप्त गरेर पाँच वर्षका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएर क्रियाशील छ । सरकारमा आउनुभन्दा अघिका केही अप्ठेराहरू थिए । त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व छ । विगतका अप्ठेराको समेत सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने भएकाले पनि चुनौतीको सामना गर्न केही ढिलाइ भएको हो तर नागरिक र देशको पक्षमा काम गर्न सरकारले केही आधार तयार गरिसकेको छ । परिणाम आउनमात्र केही ढिलाइ भएको हो । अब सरकार स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
- भर्खरै भनेँ, केही विगतकै अप्ठेरा सरकारसामु आइलागे । त्यसको समाधान गर्दा केही समय लाग्यो । त्यसैभित्र कानुन निर्माणको काममा पनि ढिलाइ भयो । संविधान जारी भएपश्चात् तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी लगायतका कानुन निर्माण भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । आश्चर्यको कुरा, हामीले सरकारको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा, कानुन निर्माणका लागि विधेयक बनाउँदा शून्यताको अवस्था थियो । त्यतिबेला संसद्मा बारम्बार यो विषय उठायौँ । यसअघिको सरकारले कानुन निर्माणमा चासो देखाएन । अहिले पन्ध्र बीसवटा कानुनका लागि विधेयक बनिसकेका छन् । काम धमाधम हुने चरणमा छ । अब सम्बोधन हुन्छ । केही समय लागेको हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।
- त्यो कुरा प्रतिपक्षीले भन्ने कुरा हो । अहिले पनि चारवटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । त्यो ती विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाउनु छ । तर पटक–पटक संसद्को अवरोधले गर्दा ती विधेयक पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । खुशीको कुरा, अहिले संसद् अवरुद्ध छैन, भविष्यमा पनि नहोला भन्ने विश्वास गर्छु । यी विधेयक समितिसमक्ष पु¥याएर छलफल अघि बढाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि आजभोलि नै चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा गएको छ । तर हिजोअस्तिसम्म प्रतिपक्षी दलले सदस्यको नाम नदिँदा समितिले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । यी सब कारणले बेलाबेलामा जटिलता निम्तिने गर्छ । यस्ता कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । सदनले ‘स्मुथली’ (निरन्तर रूपमा) काम गर्ने वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।
- त्यसलाई विनम्रतापूर्वक म पूर्णतः अस्वीकार गर्छु । प्रतिपक्षीले आलोचना गर्नु अन्यथा होइन तर जनता नै त्रसित हुने ढङ्गले आलोचना गर्नु हुँदैन । जति छ त्यति आलोचना गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिले त सरकारले खासै केही गर्न पाएकै छैन अनि केको आधारमा अधिनायकवादी भयो ? प्रतिपक्षीले विनाआधार टिप्पणी गर्नु हुँदैन । अधिनायकवाद भनेको साह्रै गम्भीर विषय हो । हामी निरङ्कुशताको विरुद्धमा सँगसँगै आन्दोलन गरेर आएका हौँ । प्रतिपक्षी दलसँगै मिलेर सबैले निरङ्कुशता परास्त गरेर आयौँ । यस्तो आरोप लगाउनुभन्दा पहिले प्रतिपक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न नहुने गरी आरोप, टिप्पणी गर्दा राम्रो हुन्छ, प्रतिपक्षी दललाई पनि ।
- कतिपय कुरा स्वाभाविक लाग्छन् । उदाहरणका रूपमा प्रधानन्यायाधीशको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समिति आफ्नो निर्णय गर्ने प्रयासमा छ । प्रक्रियाअनुसार अघि बढेको छ । सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर समितिले उचित निर्णय गर्ला । धेरै वर्षदेखि यो प्रक्रिया आत्मसात् गर्दै आएका छौँ । त्यसैगरी, कतिपय सरकारका निर्णयका प्रसङ्ग पनि छन् । सरकारले गरेको निर्णयमा प्रतिक्रिया आउनु अस्वाभाविक होइन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्ने क्रम जारी छ । कतिपय प्रसङ्गमा अदालतले स्टेअर्डर पनि गरेको सुनेको छु, जुन अन्यथा होइन । हामी अदालतको आदेशको सम्मान गर्छौं । काम गर्दै जाँदा केही समस्या आइपर्नु अस्वाभाविक होइन ।
- न्याय क्षेत्रमा केही विकृति र विसङ्गति देखापरेका छन् । लामो समय इमानदारीपूर्वक सर्वोच्च अदालतमा काम गरिसकेपछि स्थायीसम्म नबनाइकन, अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट बिदा गरिएका उदाहरण पनि छन् । त्यसको आलोचना भएकोे छ । कतिपय कामको क्रममा आफ्नो स्वार्थ लाद्ने प्रयास पनि भएका छन् । अदालतलाई एकदम अप्ठेरोमा पार्ने काम पनि भएको उदाहरण छ । वास्तवमा, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैतिर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैक्रममा पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश पनि हामीले बनायौँ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएबापत पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि षड्यन्त्रपूर्वक महाअभियोग लगाउने काम भयो । त्यो कहाँबाट कसरी भयो ? छातीमा हात राखेर सोच्न प्रतिपक्षीलाई आग्रह गर्छु– अहिलेको जस्तो दुई तिहाइ निकट त्यो सरकार हुँदो हो त के गथ्र्यौं ? अबका दिनमा पुनः त्यस्तो घटना नहोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । अदालतमा सरकारको छायाँ पार्ने काम विल्कुल गलत हो, वर्तमान सरकारले त्यस्तो कुनै काम गरेको छैन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन ।
- व्यक्तिको आफ्नो आस्था र दृष्टिकोण हुन्छ । उहाँले सडकमा आएर सरकार विरुद्धमा केही टिप्पणी गर्नुभयो भन्दैमा उहाँको बारेमा मेरो धारणा परिवर्तन हुने हो भने म पनि उस्तै हुन्छु । खाली मेरो एउटा आग्रह छ, एउटा विशिष्ट तहमा पुगेको व्यक्तित्वले कुन ठाउँमा के बोल्ने भन्ने ख्याल भने गर्नैपर्छ । त्यसरी गरिएका सडक टिप्पणीमा कति सत्यता छ ? बोल्ने आफैँले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । यसमा नागरिकले पनि मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ ।
- यसमा दुई किसिमका विचार छन् । सत्तापक्षले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा अलग अलग दलबाट उम्मेदवार हुनुभयो, पछि उहाँहरूले दलबाट राजीनामा गरेर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सभामुख र उपसभामुख हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? सवाल अहिले यो हो । तर म त यसमा धेरै छलफल गर्न चाहन्नँ । किनभने साथीभाइले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो भने अदालतले आदेश जारी गर्ला । संसद्मा पनि यो बहस जारी छ । सर्वोच्च अदालतले यसलाई पनि छिनोफानो गरिदिनुपर्छ । अदालतले गरेको निर्णय सबैलाई मान्य हुन्छ ।
- हो, ३३ किलो सुनको कारबाहीको प्रसङ्ग, यातायात सिन्डिकेट विरुद्धको कारबाहीको विषय राम्रोगरी उठेका थिए । यत्तिमात्र होइन, दुई दुईवटा प्रहरी सेवाका आईजीपीको नियुक्ति पनि निर्विवाद भएका थिए । एउटा आइजीपीको नियुक्तिले हिजो मुलुक हल्लिन्थ्यो । अदालतसमेत प्रभावित हुन्थ्यो । यो महìवपूर्ण काम सरकारले गरेको छ । अर्को ठूलो कुरा, हाम्रो छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध पनि हो । एकपटक नाकाबन्दीसमेत लाग्यो । नाकाबन्दी हटाउन केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुप¥यो । अहिले फेरि ओली नेतृत्वकै सरकार छ र यसले दुवै छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सफल भएको छ । दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतले नेपालको समृद्धिमा हार्दिकतापूर्वक सहयोग गर्न तयार भएका छन् । यो सरकारको उपलब्धी हो । यही आधारमा उभिएर म भन्छु, हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएका छौँ । यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता हाम्रो हो । हामी पछाडि हटेका छैनौँ, सरकार पछाडि हटेको छैन, काम । गरेर देखाउँछ ।
- प्रतिपक्षी दलले टिप्पणी गर्नुलाई म अन्यथा लिन्नँ । प्रतिपक्षीको हामी सम्मान गर्छौं । प्रतिपक्षी दललाई आउने सरकार पनि हो भनिन्छ । जहाँसम्म टिप्पणीका कुरा छन्, म फेरि पनि भन्छु, यो एक वर्ष त विगत सरकारले गरेका कमी कमजोरी सच्याउँदै बित्नेछ । तथापि यो सरकारले कामको राम्रो सङ्केत देखाएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाएर देखाउने यो सरकारको प्रतिबद्धता हामी पूरा गरेर देखाउँछौँ ।
- सरकारले यति समयसम्म के ग¥यो र अब के गर्नुपर्छ भन्ने तयारी गरिरहेको छ । विगतमा जे जति कमी कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।
- निर्वाचनताका हामीले ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाभत्ता वृद्धि गर्ने कुरा गरेकै हौँ । त्यो हामीले हाम्रै पालामा पूरा गर्छौं । तर हामीले सरकारको नेतृत्व लिइरहँदा देशको आर्थिक अवस्था के थियो ? त्यसबारे हामीले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेर जानकारी गराएका छौँ । पहिले देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउँछौँ, त्यसपछि जनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं ।
- अहिले हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी संविधानको कार्यान्वयन हो । असोज ३ गते नजिक आइसक्यो । हामीले सोही अवधिभित्र कानुन निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसो नगरे देशमा फेरि समस्या आइपर्छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन संविधानको कार्यान्वयन अनिवार्य छ । त्यस दिशामा अघि बढ्न हामी सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ । दलको आआफ्ना सोचाइ र विचार छन् तर देशको पक्षमा सबै एक हुनैपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल मिलेरै अघि बढेमा देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।